ब्ल्याकबेरी जाम - Thermomix रेसिपी | ThermoRecines
Thermomix नुस्खा किताब
Thermomix साथ मिठाई व्यंजनहरु
Thermomix संग स्वस्थ खाना पकाउने
Thermomix साथ व्यंजनहरु एक्सप्रेस
Thermomix साथ व्यंजनहरु2एक्सप्रेस
Thermomix साथ विशेष व्यंजनहरु
एकता पुस्तक ब्लगिंग र पाक कला
चामल र पास्ता
पेय पदार्थ र जुस
सलाद र तरकारीहरू
आटा र रोटी
जाम र संरक्षण
सूप र क्रिम
थर्मोमिक्स बिना व्यञ्जनहरु
१ 15 मिनेट भन्दा कम
१ 30 मिनेट भन्दा कम
१ घण्टा भन्दा कम
१ घण्टा र .० मिनेट भन्दा कम
१ घण्टा र min० मिनेट भन्दा बढि
थर्मोमिक्स भनेको के हो?
थर्मोमिक्स टीएम Buy किन्नुहोस्
TM5, TM31 र TM21 बराबरहरू
Thermomix बनाम MyCook
लग इन गर्नुहोस् o साइन अप र ThermoRecines को मजा लिनुहोस्
द्वारा सिल्भिया बेनिटो
यो दिंदा सधैं आनन्द हुन्छ हिंड्छ र स्वादिष्ट फलहरू उठाएर आफूलाई मनोरन्जन गर्नुहोस्, विशेष गरी जब यो ब्ल्याकबेरी मौसम हो।
मेरो परिवारमा यो खोज्नको लागि पहिले नै परम्परा छ जामुन सब भन्दा रमाईलो कुरा यो हो कि हामीले धेरै टाढा जानु हुँदैन किनभने जहाँ हामी बस्दछौं धेरै सहरीकरणमा धेरै ब्राम्बलहरू छन्।
यस वर्ष मैले मेरा छोरीहरूलाई केही दिनको लागि प्रोत्साहित गरिरहेको थिएँ मलाई सहयोग गर्नका लागि फसल यद्यपि हामीसँग मेरा छिमेकीहरूका बच्चाहरूको पनि मद्दत छ, जसले हामीलाई देखे पछि उनीहरूले सहयोग गर्न थाले: र तपाईं उनीहरूसँग के बनाउने विधि बनाउँदै हुनुहुन्छ ...? तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि मैले तिनीहरूलाई जवाफ दिएँ !! 😉
म सामान्यतया धेरै संग यो जाम बनाउँछु चिनी को मात्रा। तपाइँलाई पहिले नै थाहा छ कि म यसलाई कम गर्न चाहन्छु जब म सक्दो गर्न सक्छु ताकि तिनीहरू यति मीठो हुँदैनन्, तर यदि यो धेरै घटाइन्छ भने यो तीतो हुन सक्छ र पर्याप्त संरक्षण प्राप्त गर्न सक्दैन।
म पनि पानी जोड्छु ताकि यो धेरै बाक्लो छैन, किनकि मलाई यो मनपर्दैन धेरै कम्प्याक्ट जाम।
यो तयारी गर्दा, तपाईं चाहनुहुन्छ भने बीज हटाउनुहोस्। यो धेरै सजिलो छ, तपाईंले केवल पानीले ब्ल्याकबेरीलाई कुचो पार्नु पर्दछ र त्यसपछि तिनीहरूलाई चिनियाँ वा राम्रो जाल त्राउने माध्यमबाट पार गर्नुपर्दछ। त्यसोभए तपाईंसँग जाम बनाउन पल्प तयार छ।
यदि तपाइँ तपाइँको जाम धेरै महिना रहन चाहानुहुन्छ भने, उत्तम कुरा यो हो एउटा खाली ठाउँमा तिनीहरूलाई सुरक्षित गर्नुहोस् हामी यो संग कसरी गरे आरु जाम हामी कति धनी थियौं।
1 ब्ल्याकबेरी जाम
यो नुस्खा बचत गर्नुहोस्
बचत गर्नका लागि कृपया लगईन गर्नुहोस्
तपाईंको ब्रेकफास्टहरू यस घर बनाइएको जामसँग फेरि कहिलै हुने छैन।
रेसिपी प्रकार: जाम
खाना पकाउने समय: 26M
कुल समय: 26M
Black०० ग्राम ब्ल्याकबेरी (धुनुभयो र डाँठ बिना)
G० ग्राम चिनी
१/२ निम्बूको रस
२०० ग्राम पानी
हामी ब्ल्याकबेरीलाई राम्रोसँग धुन्छौं र तिनीहरूलाई पानी र कागतीको रससँगै गिलासमा राख्छौं। हामी समयमा कुचल्छौं Seconds सेकेन्ड गतिमा।
त्यसो भए हामी चिनी र कार्यक्रम थप्छौं २ minutes मिनेट, भेरोमा तापमान, गति २ र १/२.
यदि अन्त्यमा यस्तो देखिन्छ कि त्यहाँ केही तरल पदार्थ बाँकी छ भने हामी more थप मिनेटहरू राख्न सक्दछौं, उही तापमान र वेगमा, एक बेकर बिना र टोकरी माथि नछोड्नको लागि।
त्यसपछि हामीले जामलाई शीशाको भाँडोमा राख्यौं, ढक्कनको साथ बन्द गर्नुहोस् र २side घण्टासम्म तिनीहरूलाई माथि तल छोड्नुहोस्।
विश्राम समय बितिसकेपछि, भाँडो फ्रिजमा भण्डार गर्नका लागि तयार हुनेछ।
थप जानकारी - पीच जाम
यस रेसिपीलाई तपाइँको Thermomix मोडेलमा अनुकूलन गर्नुहोस्
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: Celiac, सजिलो, ल्याक्टोज असहिष्णु, अण्डो असहिष्णु, १/२ घण्टा भन्दा कम, जाम र संरक्षण, बच्चाहरूको लागि व्यंजनहरु
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » विशेष व्यंजनहरु » Celiac » ब्ल्याकबेरी जाम
मेरो ईमेलमा व्यंजनहरु प्राप्त गर्नुहोस्
बनाउँछ 11 वर्ष
सिल्भिया, तिमी कति राम्री छौ। सत्य यो हो कि फल यति रंगीन छ कि तपाई जे पनि गर्नुहुन्छ सबै राम्रो देखिन्छ।
Piluka लाई जवाफ दिनुहोस्
सिल्भिया बेनिटो भन्यो
यो जाम यो हो कि यसमा र color छ जसले ध्यान आकर्षण गर्दछ र यो स्वादिष्ट हुन्छ। यो प्रयास गर्न हिम्मत।
सिल्भिया बेनिटोलाई जवाफ दिनुहोस्
बेगोवा गong्गोरा भन्यो
मैले weeks हप्ता अघि यो बनाएको थिएँ, मलाई कस्तो नुमाइलो लाग्ने मलाई तपाईको नुस्खा थिएन! किनकि किनकि तपाईले भन्नु भए अनुसार, मैले पानी थपेन र यो बाक्लो थियो, यद्यपि स्वादिष्ट। म तपाइँको नुस्खा परीक्षण र यो बाहिर कसरी देख्नुहुन्छ। यो पक्कै राम्रो देखिन्छ।
Begoña Góngora लाई जवाफ दिनुहोस्
Begoña, पानी संग यो बनावट मा नरम छ र धेरै धनी छ।
अनि कालोबेरीको बीउ को बारेमा के? म तिनीहरूलाई pasapures को साथ हटाउन सक्षम छैन। उल्लेखित बीउहरू स्ट्रबबेरी भन्दा धेरै कडा छन् र उदाहरणका लागि अप्रिय छन्। अन्तत: मैले यसलाई परम्परागत तान्नका साथ तान्नु पर्‍यो र हो ... तर चिनियाँ कामको कम।
कसैसँग कुनै चाल वा उपचार छ? अभिवादन
Aristoteles लाई जवाफ दिनुहोस्
सत्य यो हो कि तपाईं सही हुनुहुन्छ, बीज एक रोल हो तर म प्राय तिनीहरूलाई प्रयोग गरिरहेको छु। तैपनि, म स्ट्र्रेनरको तपाईंको सल्लाहको अनुसरण गर्नेछु, यदि तपाईं धीरजी हुनुभयो भने, यो टाढा जान्छ।
म पिप्पिन स्याउको एक जोडी थप गर्दछु, तीन वा चार किलो ब्ल्याकबेरीका लागि ती दुई, हो, म पानी थप्दिन।
बीउहरू हटाउन म मन्नुअल मेशिन प्रयोग गर्दछु जुन टमाटरका लागि हार्डवेयर स्टोरहरूमा बेच्छन्। यसको लागत २० ई हो। सामान्यतया म यसलाई जाम गरेपछि खर्च गर्दछु (बीज हटाउनुहोला।) अर्को वर्ष म चिनीको साथ ब्ल्याकबेरीलाई विवाह गर्नु अघि यसलाई गर्ने छु। अब, कि अन्यथा तपाईं अनाज मात्र प्राप्त गर्दैन तर प्राप्त सिरप को एक अंश
हामी हेर्ने छौं कसरी यो देखिन्छ
अभिवादन, म आशा गर्दछु यसले तपाईंलाई मद्दत गर्दछ
Ana लाई जवाफ दिनुहोस्
मायरा फर्नांडीज जोग्लर भन्यो
हामीसँग तपाईंको चाल साझा गर्न को लागी धन्यवाद !!
मायरा फर्नांडीज जोग्लरलाई जवाफ दिनुहोस्
म पनि पूरै गर्मीहरू जाम बनाउन खर्च गर्दछु मेरा रूखहरूबाट फल फ्याँक्नको लागि, र मेरो थर्मोमिक्सको लागि धन्यवाद म यति मोटो छैन र म एक क्षणमा समाप्त गर्छु। म सामान्यतया थोरै तटस्थ वा निम्बू पाउडर जिलेटिन राख्छु ताकि यो यति तरल हुँदैन, तर यो मोटो पनि हुँदैन, यो एकदम सही बिन्दुमा छ। के तपाईं पनि आफ्नो जिलेटिन थप्नुहुन्छ? बधाई छ र फेरि धन्यवाद।
खालीलाई जवाफ दिनुहोस्
मैले स्ट्रबेरीमा जिलेटिन थप्न प्रयोग गरें, जुन एकदमै सख्दो थियो, तर मैले बिन्दु पाइसकेको छु र मैले यसमा केही थप्न आवश्यक पर्दैन।
जुलिया क्विलिस भन्यो
यदि म यो गाढा बनाउन चाहन्छु भने, म पाउडर अगर-अगर का चिया चम्मच जोड्दछु र यो मलाई मनपर्ने तरीकामा रहन्छ।
जुलिया Quilis लाई जवाफ दिनुहोस्
मैले गत हप्ता यो बनाएको हो, तर यसमा पानी खन्याउनुको सट्टा, मैले निचोलेको कागतीको रस ठूलो बनावटमा थपिदिएँ।
ऐलिसलाई जवाफ दिनुहोस्
एलिसिया एलिसिया, म यो विकल्प पनि लेख्नेछु। धन्यबाद र शुभकामना
मेरो छोरीले अर्को चाहँदैन, ऊ ब्ल्याकबेरीलाई माया गर्छिन्। र तपाई के भन्छन्, मध्यान्न बिहान खर्च गर्न मजा छ। प्रत्येक ग्रीष्म .तुमा एक परम्परा।
Luz लाई जवाफ दिनुहोस्
हो लुज, मेरा साना बच्चाहरुले उनीहरुलाई लिन मन पराउछन्, यद्यपि कहिलेकाँही उनीहरु उत्साहित हुन्छन् र बिर्सिन्छन् कि ब्राम्बलमा स्पाइक छ ... गरीब!
मारि carmen5 भन्यो
नमस्कार, जाम एकदम राम्रो छ, मैले यस ग्रीष्म melतुमा उनीहरूलाई तरबूज र अन्जीरबाट बनाएको हो कि उनीहरूले मलाई धेरै उपहार दिएका छन् र फेरि जाम बनाउन मैले केही स्थिर गरें। तपाईंको व्यंजनहरु को लागी धन्यवाद
मारि carmen5 लाई जवाफ दिनुहोस्
कस्तो स्वादिष्ट, तपाइँको मुर्रेमा मारि कारमेन। हेरौं यदि म हिम्मत गर्दछु र आफैमा तरबूजा बनाउँछु।
यो स्वादिष्ट देखिन्छ! अब हामी मौसममा छौं, हामीले ब्ल्याकबेरीहरू उठाएर फाइदा लिनुपर्दछ र त्यसमा पुग्नु पर्छ!
तर, एउटा प्रश्न: के तपाईंले कहिल्यै फ्रिज प्याकेजहरूको साथ बेरी जाम बनाउन प्रयास गर्नुभयो?
रोसीलाई जवाफ दिनुहोस्
रोकी, सत्य यो हो कि मैले यसलाई चलाएको छैन र मलाई लाग्छ कि यो वास्तवमै राम्रो नै बाहिर आउनु पर्छ। यदि तपाइँ प्रयास गर्नुहुन्छ भने हामीलाई भन्नुहोस् कसरी।
नमस्कार !! म तपाईंको ब्लग को एक सुपर प्रशंसक हो !! हरेक दिन म उसलाई भेट्न आउँछु र म उसलाई हेर्छु र उसलाई हेर्छु !!! मलाई खाना पकाउन मन पर्छ र मलाई थर्मोमिक्स र तपाईंको पाक कला, चालहरू आदि मनपर्दछ तिनीहरूले मलाई धेरै मद्दत गरे !!! मलाई तपाईंको ब्लग मन पर्छ! र मैले आफैलाई भनें कि अब समय आयो तपाईंले तिनीहरूलाई अभिवादन पठाउन र बधाई दिन यस महान ब्लागका लागि !! Banyoles बाट एक अभिवादन !! चुम्बनहरू !!
लौरालाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईका शब्दहरूका लागि धन्यबाद, हामीलाई अनुसरण गर्नका लागि र तपाईंको समर्थनका लागि। तपाईलाई ब्लग मन परेकोमा म खुशी छु।
नमस्कार ब्ल्याकबेरी यो ईश्वरीय मैले यो बनाएको हो र म चिनीको अभावमा पुग्यो वा ब्ल्याकबेरीहरू पनि अम्ल थिए कि म यो तरबूजको बनाउँदछु भनेर मैले हेर्ने प्रयास गर्नेछु।
सितालाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते सिल्विया कृपया, मैले भर्खर पेड्रो XImenex को कटौती गरे, यो राम्रो छ तर म धेरै बाक्लो भयो, यसलाई समाधान गर्ने समाधान छ।
Chary लाई जवाफ दिनुहोस्
चेरी, यदि यो फेरि हुन्छ भने, बराबर भागहरूमा थोरै पानी र वाइन थप्नुहोस्।
ग्लूटेन-मुक्त किन्नुहोस् - जुआन भन्यो
के एक महान नुस्खा, र celiacs को लागी उपयुक्त! महान, तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद, हामी कुनै श doubt्का बिना यो प्रयास गर्नेछौं, त्यसैले स्न्याक्स वा ब्रेकफास्टहरू केही फरक हुनेछ ... हामीलाई चाहिन्छ ... वैसे मैले ब्लग पत्ता लगाएँ तर, र यो सीधा मनपर्नेमा जान्छ। ..
ग्लुटन मुक्त किन्न जवाफ दिनुहोस् - जुआन
जुआन, म प्राय जहिले पनि केही खाद्य पदार्थहरूलाई असहिष्णुको लागि उपयुक्त व्यंजनहरू तयार पार्न वा अन्य घटकलाई प्रतिस्थापित गर्न सकिन्छ भनेर विचारहरू दिन कोशिस गर्दछु। सायद, यो किनभने म सिलियाकससँग केही परिचित छु किनकि मसँग ग्लुटेन असहिष्णुताका साथ दुई भतीजा छन्। तपाईलाई ब्लग मन परेकोमा म खुशी छु।
Bitácoras पुरस्कार मा तपाइँको प्रारम्भिक रैंकिंग मा महान ब्लग र बधाई हो। हामी तपाईंको ब्लगलाई नजिकबाट पछ्याउँदछौं, हामी तपाईंलाई धेरै भाग्यको कामना गर्दछौं। शुभकामना।
गोर्कालाई जवाफ दिनुहोस्
हामीलाई अनुसरण गर्न को लागी धेरै धन्यबाद।
एमा अबेला भन्यो
म प्रयास गर्न जाँदैछु। कहिलेकाहीँ म टिप्पणी खण्डमा सीईओ गर्दिन त्यसैले म यसलाई यहाँ राख्छु: मलाई तपाइँका व्यञ्जनहरू मनपर्छ !!! अनि मैले "प्रचार" गर्दैन, सन्देश पठाउने कहाँ?
Emma Abella लाई जवाफ दिनुहोस्
टेनेरिफबाट शुभ बिहानी, कसैलाई अpe्गुर जामको विधि थाहा छ?
पृष्ठ को लागी धेरै धन्यवाद र हामीलाई लगभग दैनिक खाना पकाउन को लागी पठाउन को लागी धेरै धन्यबाद।
बेट्टीलाई जवाफ दिनुहोस्
बेटी, सत्य यो हो कि मैले प्रयास गरेको छैन तर हुन सक्छ यसले मलाई प्रोत्साहित गर्दछ। यो निश्चित गर्नुहोस् कि यो तपाइँको लागी राम्रो बाहिर आउछ।
नमस्कार, म कसरी जान्न चाहन्छु कि जाम तीतो नहोला, के म खाना पकाउने समय भन्दा बढी गर्दैछु? के म यसमा धेरै कागती जुस लगाइरहेको छु? मलाई मदत गर्नुहोस्, चाँडै!
कोलम्बिया बाट अभिवादन।
Lizeth लाई जवाफ दिनुहोस्
केवल एक चम्मच निम्बूको रस थप्नुहोस् र हेर्नुहोस् यसले कसरी कार्य गर्दछ।
मारिया जोस भन्यो
म धेरै बाक्लो, राम्रो स्वाद छु तर यो प्रसारण गर्न असम्भव छ, म के गर्न सक्छु? कस्तो तापक्रम र वेगमा पानी खन्याउनुहोस्, जसले गर्दा यो मिक्स हुन्छ, म डराउँछु कि धेरै गाह्रो भएकोले यो मिसिएन। धन्यवाद
मारिया जोसलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते मारिया जोस:
यदि तपाईं मेरो नम्र राय चाहानुहुन्छ भने, यसलाई त्यस्तै छोड्नुहोस्। यसलाई एक सपाट कन्टेनरमा राख्नुहोस् र यसलाई प्रयोग गर्नुहोस् जस्तो तपाईको विन्से छ।
यस पटक मैले बाक्लो जाम ठीक गर्ने कोसिस गरेको थिएँ तर मात्र यो खराब गर्ने प्रबन्ध मिलाएँ, त्यसैले अब जब यो मलाई हुन्छ म भन्छु कि यो ब्ल्याकबेरी मिठो छ ... ताजा चीजको साथ यो स्वादिष्ट हुन्छ !!
नमस्ते केन्द्रीयस्, यदि चिनीको सट्टा हामी जाममा स्टेभिया थप्छौं भने यो उस्तै हुनेछ… ..
रमोनीलाई जवाफ दिनुहोस्
इरेन आर्कास भन्यो
विचार रमोनी को लागी धन्यवाद!
इरेन आर्कासलाई जवाफ दिनुहोस्
चकलेट चिप मफिनहरू
मलाईदार चकलेट केले एक्सप्रेस मिठाई
उहाँहरूले हामीलाई समर्थन गर्नुहुन्छ
सबै सदस्यहरूको सूची
हालसालै सक्रिय सदस्यहरू
गाजर र दही केक
अल्मोग्रोट गोमेरो वा क्यानेरियन पेटी
झींगाको साथ भेर्डिनस
पाक कला व्यंजनहरु
कसरी पकाउने ब्लग बनाउने
Thermorecetas को सदस्यता लिनुहोस्
अनन्य व्यंजनहरुका साथ हाम्रो eBooks डाउनलोड गर्नुहोस्